ट्याग: WordPress सदस्यता | Martech Zone
ट्याग: WordPress सदस्यता
म निरन्तर प्राप्त गर्ने प्रश्न मध्ये एक हो कि म WordPress को लागी राम्रो सदस्यता एकीकरणका बारे सचेत छु। विशलिस्ट एक व्यापक प्याकेज हो जसले तपाईंको वर्डप्रेस साइटलाई पूर्ण रूपले काम गर्ने सदस्यता साइटमा रूपान्तरण गर्दछ। Software०,००० भन्दा बढि WordPress साइटहरू यस सफ्टवेयरमा पहिले नै चालु छ, त्यसैले यो प्रमाणित, सुरक्षित र समर्थित छ! विशलिस्ट सदस्यता साइट सुविधाहरू असीमित सदस्यता स्तरहरू समावेश गर्दछ - सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वा कुनै पनि अन्य स्तरहरू तपाईंले चाहानुहुन्छ बनाउँनुहोस्! को उच्च स्तर को लागी अधिक चार्ज गर्नुहोस्